QM oo digniin ka soo saartay Abaarta Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
QM oo digniin ka soo saartay Abaarta Somalia
Tuuryare 5 June 2019 5 June 2019
Warbixin ka soo baxday Qaramada Midoobay ayaa lagu walaac looga muujiyay abaaro laga cabsi qabo in markale ay ku dhuftaan qeybo ka mid ah Dalka Soomaaliya.
Qaramada Midoobay sheegtay in Shan milyan iyo afar boqol oo kun oo Soomaali ah ay wajahayaan xaalad cunno yari.
Waxaa xuseen loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in cunta yarida ay mar hore bilaabatay,isaga oo ka digay in waqtiga uu aad u yaryahay si loo gaaro dadka ay saameysay abaarta, waxaana uu intaasi raaciyay in Bisha soo socota ay xaalada aad uga sii dari karto.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in hadda kaliyA la helay (Todobo bolol iyo Toban Malyan) oo dollarka Mareykanka ah oo gar gaar deg deg ah loogu iibin rabo dadka ay abaarti saameysay ee ku nool Gudaha Soomaaliya.
Hirshabelle oo soo dhaweysay Safiirka cusub ee QM